Federasiona Malagasin’ny Atletisma Hanatanteraka Fivoriambe amin’ny sabotsy izao
Hanatanteraka AGO “Fivoriambe ara-potoana” fanaony isan-taona eto Antananarivo amin’ny sabotsy 01jona 2019 izao ny Federasiona Malagasin’ny taranja Atletisma.
Aorian’ny fanatanterahana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara sokajy “Sénior toutes catégories” etsy amin’ny kianjan’Alarobia manomboka anio 29 sy rahampitso 30 ary amin’ny zoma 31 mey 2019 izy io, handraisan’ny solontenan’ireo ligy miisa 13 eto amin’ny nosy anjara. Nambaran’ny Tale teknikan’ny FMA, Rakotomalala Tsiory fa havoakan’ny Federasiona amin’ny alin’ny 31 mey hifaranan’ny fiadiana ny ho tompondaka nasionaly ny lisitra ofisialin’ireo atleta hisolotena antsika Malagasy any amin’ny Lalaon’ny nosy 2019. Hahatratra 30 ny isan’ireo atleta raha naminavina ho 50 isa ny FMA. Fantatra ihany koa fa i Mahatana Jean de La Croix no mpanazatra voatendry hitantana an’ireo atleta Malagasy miisa 13 hiatrika fiofanana any Sina mialoha ny handehanana any Maorisy. Nambarany fa anjaran’ny sokajy “Jeunes” indray no hiatrika fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny atletisma manomboka amin’ny alarobia 05 jona 2019 izao.